Ukhozo lwe-FMUSER I-1000w Isikhululo seNqanawa yeRadio Station isixhobo sePakethi esidumileyo e-Afrika-CZH / Fmuser Fm Transmitter China Supporter Qhakamshelana: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyueokera99991
ikhaya » Akohlulwanga » Uhlu lwe-FMUSER I-1000w I-Radio Radio Station Station Package yeePakethi ezidumileyo e-Afrika
Uhlu lwe-FMUSER I-1000w I-Radio Radio Station Station Package yeePakethi ezidumileyo e-Afrika
Umhla: 2020-02-10 / udidi: Akohlulwanga
Uluhlu lweepakeji ezingama-1000w zeRadio Station zoPapasho lweeVenkile ezaziwa kakhulu eAfrika
Ukuba umtsha kwisikhululo sikanomathotholo, kunokuba nzima ukwazi yonke into nganye yezixhobo kwaye uyaqonda ukuba ingena njani kwindawo yomoya. Nantsi ikhathalogu yezixhobo onokuyakha nesikhululo sikanomathotholo ecomic. Olu luhlu lubanzi kufanele ukuba lube luncedo kwiinjineli ezintsha, okanye ziqala ukusebenza kwindawo yokusasaza.
Kwigumbi lokuqwayinga ...
Igumbi leRack (kwakhona: Igumbi lezixhobo, uLawulo lweMasters, iZiko leDatha, njl.nj) lelona gumbi ndilithandayo kwisikhululo sikanomathotholo. Kulapho uninzi lwezixhobo luhlala khona. Yindawo emnandi.
Esona sixhobo siqhelekileyo kuso nasiphi na isikhululo sikanomathotholo yikhompyuter. Oku kuza ngemilo nobungakanani obuninzi, kwaye kunokwenza imisebenzi yonke yosasazo. Baye bathandwa, ngokuyinxenye, kuba bayathengiswa (kwaye ke bayabiza kakhulu kuneebhokisi ezichaziweyo).
Iprosesa yeaudio Broadcast
I-Audio processor idla ngokuba sisixhobo sokugqibela esisetyenzisiweyo ngaphambi kokuba kudluliselwe umsindo wakho. Iinkqubo zokusasaza audiyo zinezinto ezikhethekileyo zokulinganisa umndilili / imida, kodwa zikwanazo izinto "zomlingo" ukunika isikhululo sakho ukhuphiswano. Uninzi lwezona zikhululo zifuna ukuba zezona zibalaseleyo, kwaye abavelisi beProsesa yoMsindo bonke bathi banelizwi elikhulu kwaye licacile.
I-FMUSER RDS-A Encoder ilungele uninzi lwengingqi, lendawo, ye-RSL, ye-LPFM kunye nezinye izikhululo zeradiyo eziphakathi nendawo nezincinci zisebenzisa i-Ethernet ukusasaza idatha ye-RDS enamandla. Umlawuli owakhelweyo kwi-Ethernet uxhasa amazibuko amaninzi e-TCP / UDP, imisebenzi ye-intanethi kunye nokubeka esweni okude.
I-FMUSER RDS-Encoder inomqondo opheleleyo we-DSP kunye noyilo olusebenzayo luqinisekisa ukuthembeka okuphezulu, iimpawu eziphambili zesibonakaliso kwaye zinika umsebenzisi izinto ezininzi eziphambili ngelixa egcina iindleko zokufumana eziphantsi.
I-RDS (iNkqubo yeDatha yeRadiyo) yindlela yokuthumela isicatshulwa se-ASCII kunye nenye imethadatha kubamkeli berediyo abahambelana nayo. Imisa umda wedatha eyi-1187.5Bps kwi-57Khz subcarrier (yesithathu harmonic yomqondiso we-19Khz FM Stereo Pilot). Izikhululo zisebenzisa i-RDS ukukhangela igama lesitishi, idatha yengoma, isikhokelo senkqubo kunye nolwazi lwendlela.
Ii-Encoders ze-RDS ngamanye amaxesha zakhiwa kwiProsesa yeaudiyo yakho ye-FM. Ukuba une-Encoder yangaphandle ye-RDS, kufuneka idityaniswe kwigalelo le-SCA kwi-Stereo Generator yakho okanye kwiProsesa.
Ikhonkco loku-odola: http: //www.czhfmtransmitter.com/products/fmuser-rds-a-fm-broadcast-rds-encoder-dsp-concept-and-effective-design/9364
I-FMUSER RDS-Umsasazi woRhwebo lwe-FMS Encoder yokuSasazwa kweTrafiki ye-DSP kunye noYilo olusebenzayo
Ukuba ufuna ukuthatha iifowuni emoyeni, ufuna iHybrid yeFowuni. Ngamagama alula, iHybrid luhlobo lokudibanisa iifowuni ezimbini zeengcingo kwimveliso kunye nakwimveliso yeXL. Ezi ziqhagamshelo ze-XLR zixhunyiwe kwi-console yomsindo okanye kwi-I / O node. Uninzi lwee-hybrids ziqukethe ukucinywa kwe-echo kunye nesilinganisi esizenzekelayo.
I-Hybrids zihlala zixhuma kwinkqubo ye-Talkback kunye ne-PABX, yolawulo olulula ngabaxeli.
Isinxibelelanisi se Studio
I-STL Transmitter + uMamkeli + iiYagi Antena ezimbini + ezi-20meters ze-SYV-50-5 iiCable + zokudibanisa
Ukhozo lwe-FMUSER STL10 kuTshintshiselwano lweNqanawa yeSitudiyo seRadiyo i-Yagi Antenna 20m SYV-50-5 ikhebula
Iinkcukacha zemvelaphi: Isinxibelelanisi sesitudiyo (okanye i-STL) sithumela iirediyo okanye irediyo yesikhululo sikamabonakude kunye nevidiyo kwisitudiyo sokusasaza kwisikhululo sikanomathotholo okanye isasazi sikamabonwakude kwenye indawo.Izi zinto zihlala ziyimfuneko kuba ezona ndawo zibalulekileyo ze-eriyali zingaphezulu kwe intaba, apho inqaba ende imfutshane ifunekayo, kodwa apho isitudiyo sinokungasebenzi ngokupheleleyo. Nokuba kukwimimandla elucaba, indawo embindini yesitishi evunyelweyo ayinakuba kufutshane nendawo yesitudiyo okanye phakathi kwendawo enabantu abaninzi apho udluliso luza kubekwa khona ngabahlali, ke i-eriyali kufuneka ibekwe iikhilomitha ezininzi okanye iikhilomitha kude. Iindawo ekufuneka ziqhagamshelwe, isikhululo sinokukhetha ikhonkco (i-PTP) ikhonkco kwenye irediyo ekhethekileyo, okanye ikhonkco elitsha elinentambo yedijithali ngentambo ye-T1 okanye i-E1 (okanye enkulu-umthamo). Amakhonkco erediyo anokuba yidijithali, okanye uhlobo lwe-analog lwakudala, okanye i-hybrid yezi zimbini. Nokuba kwiinkqubo ze-analog ezindala zonke, iindlela ezininzi zokumamela kunye nezedatha zinokuthunyelwa zisebenzisa ii-subcarriers.STL10 I-Studio ukuya kwi-Transmitter Link / i-Inter-sixeko edlulayo yinkqubo yonxibelelwano ye-VHF / UHF FM enikezela ngesitishi serediyo esisemgangathweni ophezulu ngeebhendi ezahlukeneyo. Ezi nkqubo zinika ukwaliwa okukhulu kokuphazanyiswa, ukusebenza kwengxolo enkulu, intetho encinci esezantsi, kunye nokungafuneki okukhulu kuneenkqubo zangoku ze-STL. Iimbonakalo* I-Synthesised ukusuka kwi-220 ukuya kwi-260MHz, 300 ukuya kwi-320MHz, 320 ukuya kwi-340MHz, 400 ukuya kwi-420MHz kunye ne-450 ukuya kwi-490MHz
* Umsasazi owudlulisiweyo nowamkelweyo unokumiselwa ngokulula yiphaneli yangaphambili yedijithali
* Ifanelekile kumsindo wedijithali. I-subsonic ngaphezulu kokuguqulwa kwemigangatho kunye nokuphambuka kwesigaba esiphantsi kulawulwa yisekethe yokuphendula ukuze kuphakanyiswe umgangatho weaudiyo yeenkqubo zedijithali.
* Ukwahlula okuphantsi kwe-THD: Ixabiso le-THD nge-stereo okanye i-mono demodated and signals deemphasised alunakulinganiswa.
* Ukuphendula rhoqo kweflethi: ngenxa yetekhnoloji yohlobo lwakamuva kunye nokuchaneka kwamacandelo okuphendula ngokuqinisekileyo kuyinto eqinisekileyo.
Ikhonkco loku-odola: http: //www.czhfmtransmitter.com/products/stl-studio/fmuser-stl-studio-to-transmitter-link-for-fm-radio-station/3869
Isitshisi esisodwa se-FMW esisodwa seSikhululo seRadiyo
Umsasazi we-1000w FM uthatha umqondiso we-Stereo Baseband (ukusuka kwi-Stereo Generator yakho, mhlawumbi nge-Composite Swatch), uyimodareyitha rhoqo kwimvume yakho yelayisensi.
* Isandi sochwephesha esinobuchule ngokwahlula okuhle
* Umgangatho oqhelekileyo we-19 ″ 2H rack, uyilo olucocekileyo kunye nomgangatho ophezulu
* Ukwahlula okuphantsi kunye nomgama olungileyo weSignali / Ingxolo
* Inkqubo eyakhelweyo ye-CPU yokulawula nokubeka iliso
* Ukuqhubela phambili kweTEMP kunye nokukhuselwa kwe-SWR
* Uluhlu oluhlala rhoqo: 87.5-108 MHz, 10 KHz / Inyathelo
* Impembelelo yeziphumo ze-RF: 50 Ω
* Isixhobo sokukhupha i-RF: N uhlobo -female
* Isinxibelelanisi segalelo somsindo: XLR-fem
* I-MPX kunye nesixhobo sokufaka i-AUX: I-BNC-ibhinqa
* Ukugxininisa kwangaphambili: 0 / 50 / 75 us
* Iimfuno zokuhambisa umbane: 90 ~ 264VAC; 127 ~ 370VDC
* Uluhlu lobushushu olusebenzayo: -10 ukuya ku-45 ℃
* Ubunzima: 10 Kg
Order link :http://www.czhfmtransmitter.com/products/fm-transmitter/fsn-1000t-1000w-1kw-fm-transmitter-radio-broadcast-with-touch-screen-aux-cover-20-30km-radio-station/8832
Omnye uDipole Antenna
* Uluhlu oluRhoqo: 87.5Mhz-108Mhz
* Ukugxininisa: 50ohm
* Umnxibelelanisi: NK
* I-VSWR: <1.35: 1 MAX
* Inkqubo: I-Polarization: Yimethi ebanzi
* Ubungakanani: 1400 * 900 * 50mm
* Ubunzima: I-4kg enezinto zokubeka izixhobo
* Ukufumana: 2.0dB
* Ubuninzi bokuphatha amandla: 1KW
Intambo enye ye-30M Coaxial * I-50 ukuya kwi-12met ye-30meters ye-NJ-SL16-J ikhebula lokuhambisa
Umxube weendlela ezi-8
Two Monitor Yentloko
I-FU44 Monitor yentloko
* Indlela yokunxiba: Indlebe ezivaliweyo
* Uhlobo lwentloko: Intambo
* Nokuba ngaba umbhobho: Hayi
* Inkonzo yentloko: Genius
* Impendulo ethe rhoqo 18-20000Hz
* ukuphazamiseka kwe-32 Ohms
* I-SPL 115 dB SPL / V
* Ukugqwetha okune -onic: <1%, ubuninzi
* Igalelo lamandla e-200mW
* Iindlebe zesikhumba, i-othomathikhi yentsimbi ye-headset
* Into elula
* Iifowuni ezingasemva ezibuyisekayo
* Ukusebenza kwexabiso elifanelekileyo
Isithethi ezimbini ezibekekileyo
Ukubeka esweni i-FMUSER H-111
* I-Bass yi-4 intshi yetshiphu yentsimbi
* I-1-intshi ye-tweeter enomazibuthe
* Amandla 50w
* Amandla aphezulu we-70w
* Ukwahlula ngokwasemzimbeni
* Ummiselo wokuxhomekeka othembekileyo
* I-Bass Independentregulation
* Zonke iibhokisi zokhuni u-9mm wamaplanga
* I-Vated 220v yeXV okanye i110V
Iprosesa yeaudio enye -U-FMUSER FU2600
* Reference-Class 2-Channel Expander / Isango / isiguquli / isixhobo esiphakamileyo somnxibelelanisi weDynamic edityanisiweyo, iDe-Esser kunye neFilitha yefour Contour
* Inkqubo eguqulwayo yenkqubo ye-IKA (ejongene neThuthi yoTshintsho) ejikelezayo idibanisa izibonelelo zeempawu ezinzima zedolo kunye needolo.
* Isixhasi esiguqukayo seMitha esineemitha zokuqaqamba, imisindo ephilayo kunye noxinzelelo olusindayo
* I-IGC (Ulawulo lweeNtsebenzo eziHlanganisiweyo) ukunyanzeliswa kokujikeleza kudibanisa isiqwengana sombhalo kunye nomda wenkqubo wokukhuselwa okuqinisekileyo kunye nokuchaphazelayo kwizikhonkwane zomqondiso
* Isincoko esiguqukayo sisusa ubuzwilakhe obugqithisileyo kwizimbo zakho zomsindo
* I-IRC (Ulawulo oluHleluzayo lweeRatio) isikhulisi / isango lokujikeleza kwesango lokucinezelwa kwengxolo
* Ukuhlaselwa ngokuzenzekelayo okanye ngesandla kunye namaxesha okukhulula
* Igama leMveliso: FMUSER FU-350
* Imveliso: I-FMUSER
* Uhlobo lweTuer: Inamandla
* Iingcingo: Zintambo
* Isitishi: 1
* Iimpawu zokubonisa: I-Cardioid
Iingalo ezimbini zeMikrofoni
* Imithombo emine yangaphandle
* ICantilever ekhawulezayo yokuqhina
* Iibhubhu ezimbini eziphezulu, iibhubhu ezintathu ezantsi, zandisa uzinzo
* Ingasetyenziselwa ufakelo oluthe tyaba kunye noluthe nkqo
* Isamente esifihlakeleyo inokuba idlule kwikhebula ukusuka kwi-boom
* Izixhobo zomgangatho weChassis Mount standard
Isembozo se-BOP ezimbini
* Isihluzi esikhulu esiphindwe kabini
* Ushicilelo losasazo
* Ikhava ye-Microphone BOP
Studio kwi-AIR! Ibhodi yokusasaza ebanzi yokukhanya kwebhodi yeBhodi yeNgcebiso eshushu
Ikhonkco loku-odola: http: //www.czhfmtransmitter.com/products/led-studio-on-air-live-broadcast-light-sign-warning-board-warm-tip-board-notice-board-in-network-cadorsity / 9140
Isoftware yokudlala kunye nokuZenzekelayo
Inkqubo yecomputer edlala ngasemva umculo, amabala (iintengiso, iintengiso, njl. Njl. Njl. Njl.) Kunye neselifowni (izwi elincinci elidlalwe phakathi kweengoma) libizwa ngokuba yiPlayout System okanye iSoftware ezenzekelayo. Ezi ziinkqubo zekhompyuter ezilungiselelwe ngokukodwa ezivumela ukudlala ngokuqhubekayo komsindo, ngolawulo oluninzi lwegranular kubaBhengezi kunye nabaLawuli beNkqubo.
Intliziyo yayo nayiphi na inkqubo ye-automation yi "log". Olu luhlu lokulandelelana kwazo zonke iifayile zomsindo kunye nemiyalelo ekufuneka idlalwe ngamaxesha athile. Wonke umculo odlaliweyo kwisikhululo sikanomathotholo wentengiso uyakuba ucwangciswe kwangaphambili nguMlawuli woMculo kwaye ungene kwi-log. Umntu owahlukileyo uya kuhlala elayisha zonke iintengiso kwincwadi enye.
Uninzi lweenkqubo ezizenzekelayo zikwanalo novimba weenkcukacha womculo, izitshixo ezishushu (ukudlala i-ad-hoc audi), umhleli weaudio, umhleli we-segue (ukutshintsha ukuxubana phakathi kwezinto ezahlukeneyo), indawo yendawo yewebhusayithi kunye nedatha yeRSS, nokunye okuninzi.
* Isakhono sokudlala, sokumisa okanye kungenjalo sahlula izinto zemithombo yeendaba ezihambelana nendawo yexesha ivumela ulawulo oluchanekileyo lwexesha kunye nokulibaziseka kancinci. Kwindlela yokusebenza, kusoloko kuthetha ukuba inkqubo yosasazo iya kuba ngephanyazo okanye ubuncinci baphumeze umiselo lwangaphambili. Umzekelo, dlala uluhlu lweentengiso kwangoko.
* Ukwazi ukudlala amatikiti eenkqubo zokumamela ezisetiweyo ngexesha elinye, akukho xesha lide phakathi kwezi zimbini.
* Ukusebenza okuzenzekelayo, okubandakanya ukubekelwa ixesha ngokugqibeleleyo kwezinto zosasazo eziza kudlalwa.
* Khawuleza ukhawuleze kwaye ufikelele kwindawo ekugcinwa kuyo iifayile ze-elektroniki zemithombo yeendaba okanye imithombo yeendaba yenethiwekhi yekhompyuter.
* Inkqubo edibeneyo yolawulo lokudluliselwa kwemithombo yeendaba evumela ulawulo olukhawulezileyo kunye nokuguquguquka kokudlala kwento yemidiya (isantya, ukuphakama, isingqisho, amaqhosha, ukuqhelanisa, inqanaba, njl.njl.).
* Ukwahlulahlula-hlulo kunye nokuguqula (iaudiyo nevidiyo) phakathi kwezinto zemidiya kunokulawulwa / kulungiselelwe, kwaye inkqubo inokubakho iziphumo eziqinileyo.
* Ulawulo oluphezulu lweempawu kunye nokubalula kokukhutshwa, luhlala luzimele kwimithombo yeendaba. I-Audio (inqanaba, uxinzelelo, uhlengahlengiso, njl.njl) kunye nevidiyo (inkqubo, umyinge wesakhelo, umlinganiselo wenqaku, njl. Njl.) Ziyahlengahlengiswa kwaye ziyagcinwa ngaphandle kokungafani nefomathi okanye iimpawu zosasazo lwemithombo yolwazi edlalwayo ngoku.
* I-Audio / ividiyo eyogqume, umhlobiso, isihloko, i-watermark, inokudityaniswa ngaphandle komthungo kwimveliso.
* Inika inkxaso yolawulo lwe-interface, enokuthi icwangciswe okanye i-odolwe zixhobo zangaphandle okanye zixhunyiwe kwezinye izixhobo.
Ikhonkco loku-odola: http: //www.czhfmtransmitter.com/products/czh-dj-auto-300-fm-audio-automatic-broadcast-and-management-system-workstation-for-fm-radio-station-in-air -gumbi / 9729
Abadlali beCD, ooMatshini be-DAT, abaDlali beeDisk Diski, kunye neeTable Turn
Ngeli xesha uninzi lokurekhodwa okurekhodiweyo kwezi ntsuku zidlalwa kwikhompyuter, akuqhelekanga ukufumana ezi zixhobo zokudlala kwisudiyo (nkqu nokugcina, okanye indlela yokufaka izixhobo zakudala). Ukudlala kwezi zixhobo kudla ngokubangela ukuba ucofe ngqo kwiqhosha lekhonsoli yeaudio.
Kwenye indawo ...
I-UPS inokuhlala ixesha elide. Ukuqhuba ixesha elongeziweyo ngexesha lokuphuma, ufuna i-generator enokubakho kwesibaso esifanelekileyo. Ngokwesiqhelo i-generator yendawo yosasazo iqhagamshelwe ngokusisigxina ngesitshintsho esizenzekelayo- oku kuyivumela ukuba iqale ngokuzenzekelayo xa amandla e-mains elahlekile.
Umvelisi kufuneka aqhagamshelwe kwigalelo le-UPS kwimeko yempazamo ye-mains. Oku kugcina amandla efayilisiwe, kwaye iibhetri zityiwe. Oku kuyakuvumela ukuba uvale i-generator ngelixa uphakamisa (kwimeko yokuphuma okongeziweyo).
Ukuba ufuna ukwakha isikhululo sikanomathotholo, wamkelekile ukuqhagamshelana nam:
«Ngaphambili: Ukuguqulwa kwesisombululo-esi sisombululo sinokubonelela ngesisombululo esisezantsi sevidiyo kubasebenzisi abancinci be-Intanethi
HEREISTITLE :Okulandelayo "